युगसम्बाद साप्ताहिक - शिक्षण संस्था दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि कार्यकर्ताको कारखाना
Saturday, 04.04.2020, 02:12am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 08.20.2019, 01:26pm (GMT+5.5)
सामान्य उदाहरण यस वर्ष (२०७५) सालको एसईई परीक्षाको नतिजाले नै देखाएको छ । उत्तीर्ण प्रतिशत अनि उच्चश्रेणीको नतिजामा निजी विद्यालयकै बाहुल्य रहेपछि सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरको विषयलाई अनेक पक्षबाट टीका–टिप्पणी गर्न थालिएको छ । अनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निःशुल्क शिक्षा वा सशुल्क शिक्षाको बहसले पनि व्यापकता पाएको छ ।
हाम्रो परम्परा थियो– ‘शिक्षादान महादान’को सूत्र अँगालेर एक व्यक्ति शिक्षित र ज्ञानी हुँदा त्यसले आफ्नो र परिवारको मात्र हैन सिंगो पृथ्वीको भलो गर्छ भन्ने पूर्वीय सभ्यताबाट अनुप्राणित भएका ऋषिमुनिका सन्तान हामी आजभोलि शिक्षा जस्तो विषयलाई नै सबभन्दा बढी विवादित बनाइरहेका छौं । यस्तोमा शिक्षा सेवा कि व्यापार भन्ने बहस चल्नु स्वाभाविक हो र यो बहस समयसापेक्ष शैक्षिक नीति नहुँदाको परिणाम हो । यदि मुलुकले स्पष्ट शैक्षिक नीति अवलम्बन गथ्र्यो भने यस्ता बहस सतहमा आउने नै थिएनन् । शिक्षाका बारेमा आलोचना, प्रत्यालोचना हुने थिएन । जे नहुनुपथ्र्यो त्यही भैरहेको छ ।
त्यसैले शिक्षा व्यापारिक कि सेवा ? शिक्षित, सभ्य र सुसंस्कृति जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो कि राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना भन्ने प्रश्नको उत्तर आमजनको मस्तिष्कबाट हटेको छैन । शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राज्ञिक क्षमताभन्दा राजनीतिक दल र नेताको निकटतालाई पहिलो योग्यता मान्ने गलत अभ्यासका कारण आज विश्वविद्यालयदेखि सामुदाविक विद्यालयसम्मको शिक्षा तहसनहस भएको छ । त्यसैले सरकारी लगानीका सामुदायिक विद्यालय र निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरुबीचको शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा अनेक टिप्पणी गर्ने गरिएको छ । निजी (संस्थागत) विद्यालय नाफाखोर भए, अनेक प्रलोभनमा पारेर अभिभावकलाई ठगेको भ्रम एकातिर फैलाइएको छ भने अर्कोतिर सामुदायिक विद्यालयमा पढाई नै हुँदैन, गुणस्तर छैन भन्ने टिप्पणी पनि यथावत छ । हुन पनि हरेक वर्षको माध्यमिक तहको विद्यालयस्तरीय परीक्षाको नतिजाले यस्तै देखाउँछ । २०७५ सालको एसईई परीक्षामा कूल सहभागी चार लाख ९५ हजार २७५ विद्यार्थीमध्ये सार्वजनिक विद्यालयबाट ७० दशमलव ८४ र निजीका २९ दशमलव १६ प्रतिशत विद्यार्थी छन् तर माथिल्लो जिपिए ‘ए प्लस’ ल्याउने विद्यार्थी १४ हजार ७८८ निजी विद्यालयका छन् भने सार्वजनिक विद्यालयका दुई हजार ७९२ विद्यार्थी मात्र छन् । यही नतिजाले देखाउँछ निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा सार्वजनिक विद्यालयको स्तर कहाँ छ भनेर । सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधारका लागि विभिन्न अभियान र कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि परीक्षाफलमा निजी लगानीका विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो स्तरीकृत अङ्क (जिपिए) ल्याउँदै आएका छन् ।
सबैभन्दा तल्लो जिपिए ‘इ’ ल्याउनेमा सार्वजनिक विद्यालयका छ हजार ६७३ छन् भने निजीका एक हजार ९६ मात्र छन् । यसरी हेर्दा फेरि पनि सरकारी विद्यालयको स्तर निजीको तुलानमा कमजोर देखिएको छ । अर्को यथार्थ झन डरलाग्दो छ– सामुदायिक विद्यालयका ४८ प्रतिशत विद्यार्थी अंग्रेजी, विज्ञान र गणितमा अनुत्तीर्ण हुन्छन् । यसको विपरीत निजी विद्यायलले यिनै विषयलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन् ।
विद्यालय तहको शिक्षामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुबीच देखिएको असमानताले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामीले भुल्नु हुँदैन । नतिजाका आधारमा संस्थागत विद्यालयका तुलनामा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरुले पाउने सेवा सुविधाका हिसाबमा सामुदायिक विद्यालय अगाडि तर शिक्षणमा सामुदायिक विद्यालय पछाडि ! कारण के हो ? यही अहिलेको सबभन्दा ज्वलन्त प्रश्न हो ।
अब सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुबीच समानता ल्याउनुपर्छ भन्न थालिएको छ र यसका लागि विभिन्न प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएका छन् । अनि विद्यालय शिक्षा (सामुदायिक)को गुणस्तर कायममा निजी बाधक रहेको भन्न थालिएको छ । तीसौं अर्ब रुपैयाँ वार्षिक खर्च हुने सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन निजी बाधक बनेको भन्नु कति जायज होला ? यो सार्वजनिक बहसको विषय हो । सत्य के हो भने वार्षिक ३० अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च गरिने सामुदायिक विद्यालयहरुले सोचेजस्तो नतिजा दिन सकिरहेका छैनन् । राष्ट्रको त्यत्रो लगानी (अपवाद बाहेक) बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भैरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरु शैक्षिक थलो कम राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना बढी भएको छ ।
यसको विपरीत निजी क्षेत्रबाट संचालित विद्यालयहरुको गुणस्तर तुलनात्मक रुपमा माथी छ र अब विज्ञ भनिनेहरुबाटै सुझाव आउन थालेको छ– “सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्छ ।” विज्ञहरुको यस्तो तर्कलाई सामान्य मानिसले पनि सजिलै बुझ्न सक्छन् कि “अग्लोलाई होचो पारिदिए होचो र अग्लो बराबर भैहाल्छ”, होचोलाई पोषण दिएर अग्लो बनाउने झन्झट किन गर्ने ? के यही हो गुणस्तर र समानताको सिद्धान्त ?
शिक्षा जनताको मौलिक हक हो र सबैलाई निःशुल्क अनि अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नीति, नियम र ऐन पनि बनेको छ । निःशुल्क भने पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले केही न केही शुल्क कुनै न कुनै नाममा उठाइरहेका हुन्छन् । यो आम अभिभावकले सहजै तिरिरहेका पनि छन् तर निःशुल्कको नाममा पैसा तिर्ने अनि बालबालिकाले सोचेजस्तो परिणाम नल्याउने भएपछि गाँसै काटेर भए पनि निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो भनेर विद्यालय शिक्षाको भार निजीले बोकिदिएको छ भन्ने कदापी हैन, किनभने अहिले पनि दुई तिहाई बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै पढ्छन् ।
नतिजा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयहरुले नेपालको विद्यालय शिक्षाको इज्जत धानिदिएकोमा कसैले विमत राख्नु पर्दैन । होला केही बदमासी गर्ने, शोषण गर्ने पनि । यसको विपरीत अधिकांश विद्यालयहरुले सुलभ शुल्कमा राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । अब सामुदायिक विद्यालय जो सरकारी अनुदानमा चलिरहेका छन् ती विद्यालयहरुले थोरै शुल्क लिएर निजी विद्यालयहरुका पाठ्यक्रम र सामान्य सुविधा दिने हो भने दुबै वर्गका विद्यालयबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धाले स्वाभाविक रुपमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउँछ ।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको लगानी, शिक्षक शिक्षिकाको योग्यता र उनीहरुले सरकारी लगानीमा पाएको तालिम शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि खै खर्च गरेको ? शिक्षकहरुलाई दलका कार्यकर्ता बनाएर सडकमा नारा जुलुश गराएर रमाउने सरकार र दलहरुले नेपालको शिक्षा कुन मोडमा पुगेको छ भन्ने ख्याल नै गरेका छैनन् । लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन सोही अनुरुपको नीति नियम बनाउनुपर्छ । क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ र लाभका लागि शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्ने छुट दिएका परिणाम हो यो ।
नेपालमा सरकारी लगानी रहेका शिक्षालयहरुको गुणस्तर किन कमजोर भयो ? यो गम्भीर बहसको विषय हो । विद्यालय मात्र हैन उच्च शिक्षामा पनि त्यस्तै हालत छ । हिजोसम्म एसियाका उत्कृष्टमध्येमा पर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज कहाँ छ ? यसको कारण के हो ? यो खोजी नगरीकन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउन निजी विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने तर्क गर्नु नालायकी बाहेक केही हैन । हो शिक्षामा सरकार नै नम्बर एक हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै निजी । विश्वमा देखिएको यस्तै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा सरकारसंग निजीले प्रतिस्पर्धा गर्छन् । सरकारी विद्यालयहरु उच्च गुणस्तरीय हुनाले निजी पनि त्यही अनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा प्रतिबद्ध हुन्छन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई पनि सरकारी विद्यालय नै हुने गर्दछ ।
नेपालमा यसको ठीक उल्टो छ । सबैको पहिलो रोजाई निजी विद्यालय अनि मात्र सरकारी अर्थात् अलिकति दुःखजिलो गरेर पढाउन सक्नेले निजीमै पढाउँछन् । सरकारी विद्यालय त गरीब–दुःखीका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयका रुपमा प्रचारित छ । यसको कारण पत्ता लगाउने कसले ? यी कारण पत्ता लगाएर स्पष्ट नीति सहितको कार्ययोजना अघि सार्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर उकासिन्छ । यसका लागि केही आधारभूत कार्य भने गर्नैपर्छ ।
सर्वप्रथम शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बनाउन रोक लगाइनुपर्दछ । हाजीर गरेर तलब पाक्ने प्रथाको अन्त्य हुनुपर्दछ । अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक दलको भागवण्डाको अन्त्य हुनुपर्दछ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा हरेक शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सम्भव भएसम्म आफूले अध्यापन गर्ने विद्यालय त्यो नभए सरकारीमा नै पढाउनुपर्ने अनिवार्य नियम राखिनु पर्दछ । अहिले त सरकारी विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढ्छन् । अनि कहाँबाट सुधारिन्छ विद्यालको शिक्षा ?
सुविधा, तालिम, अनुभव सबै भएका शिक्षक–शिक्षिका रहेका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा किन यती साह्रो कमजोर भन्ने प्रश्नको उत्तर उपरोक्त कार्यले दिनेछ । अहिले निजी विद्यालयको पछिपछि लाग्ने सामुदायिक विद्यालयहरु भोलि निजीलाई पछिपछि लगाउने बन्नेछ ।
शिक्षामा गुणस्तर हुनुपर्छ भन्नेमा कसैको विमती छैन । गुणस्तरीय शिक्षा परीक्षामा उत्तीर्णको प्रतिशतका आधारमा मात्रै पनि हुँदैन । निजी विद्यालयहरुले नेपालको विद्यालय शिक्षाको इज्जत धानिदिएको छ । यो तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न । हो निजी विद्यालयहरुमा विकृति–विसंगती छन् भने त्यसलाई हटाउँदै जानुपर्छ । पूर्णतः नाफामुखी बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । विद्यालय नाफामुखी हैन सेवामुखी व्यवसाय हो । यसलाई सोही अनुरुप व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।
निजी हुन् वा सामुदायिक– शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न सकेनन् भने चल्दैनन् । सवाल शिक्षाकै हो र यसको गुणस्तर अनि शुल्कको पनि हो । यसमा राज्य कति जिम्मेवार छ र विद्यालय संचालकहरु कति जिम्मेवार छन् भन्ने महत्वपूर्ण पाटोलाई अलग गर्न मिल्दैन ।
यथार्थ के हो भने कसैले पनि निजी विद्यालयमै भर्ना हुनुपर्छ, त्यही पढाउनुपर्छ भनेर दवाव दिने गरेको पनि छैन । यो अभिभावकको आफ्नै रोजाई हो र सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर उकास्दै जाने हो भने निजी विद्यालय बन्द गर्नै पर्दैन । तर अहिले निजी बन्द गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकासिन्छ भन्नु जत्तिको मुर्खतापूर्ण तर्क केही हुन सक्दैन । निजी बन्द हैन निजीलाई सरकारी विद्यालयसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्छ, विश्वका अधिकांश मुलुकमा शैक्षिक क्षेत्रमा यस्तै अवस्था छ ।